Dzidzira Ganda Vagadziri, Vatengesi - China Dzidzira Ganda Fekitori
Nyoro Silicone Huru Kudzidziswa Ganda reMuviri Art Artificial Blank Yakazara Back Tattoo Dzidzira Ganda
Yechokwadi silicone, yakapfava uye yakapfava kupenda, ukobvu 0.3cm, Tsananguro: Inochinjika mameseji, ekugadzirwa kweganda, zvigadzirwa zvakanaka zvevanotanga. Kuteedzera hunhu hwehunhu hweganda remunhu, Yakagadzirwa neyakakosha zvinhu iri padyo nekugadzirwa kweganda remunhu, uye magadzirirwo ayo akapfava uye akasununguka padyo neaya eganda revanhu. Iyo ndiyo yakanakisa tsika yekupa kune vanotanga isati yatanga kushanda. (Vamwe vadzidzi vakati iro ganda rekudzidzira riri nyore kusvibisa. Iyi nzira yakanaka kwauri, ini ...
39.5 * 30 * 0.3CM A3 size Rubber Chakagadzirwa ganda rePermanent makemikari ganda Nyoro Elastic Silicone Tattoo Dzidzira Ganda
1.Quantity: 1pcs 2.Made nechikafu-giredhi silicone zvinhu 3.Flexible uye yakafanana neganda revanhu, gobvu rakaringana rekushandisa-kwese kushandiswa 4.Free kupenda uye dhizaini pateni, ndiyo yakanakisa tsika ganda kune vanotanga kushandisa. Rondedzero: Chinyorwa: Chakagadzirwa Chakareruka Cheganda Makobvu: 395 * 300 * 3MM Package Inosanganisirwa: 1 x Tattoo Dzidzira Ganda Tsananguro Yakarongedzwa uye yakadzvanywa tattoo yekuita ganda inochengeta inki uye inopukuta-inokwanisa nejira kana pepa tauro kubvisa yakanyanyisa inki! Ndeipi pfungwa ...
20cm * 30cm Blank Dzidzira Ganda Kune Permanent makemikari Microblading Tattoo
Blank Dzidzira Ganda KwePermanent makemikari Microblading Tattoo Chishongedzo Chekuita Synthetic Skin Feature: 1. Iyo tattoo inodzidzira ganda hapana tsvina uye zvirinani ganda kubata kwekunzwa. 2.Plain ye freestyle tattoo tsika, inokubatsira iwe kudzidza kudzidza kuita yepamusoro mhando tattoo basa. 3.Practice akasiyana matekiniki, kubva pakutsanangura kusvika kumumvuri 4.Kuwedzera kwakapfava, ganda rakafanana neruvara, magadzirirwo ari padyo neganda revanhu uye anonzwa zvakafanana seganda revanhu. 5.Ideal yekuputira yakatenderedza maoko kana makumbo uye isa pazvipfuva kana musana ...
3D musoro kumeso ganda 3D Microblading Permanent makemikari eyebrow muromo tattoo maitiro Human mannequin musoro kumeso ganda
3D Mannequin Musoro Wemeso Permanent Makeup Dzidzira Ganda Risanganisira: (2Pcs Maziso, 1Pcs Lip, 1 musoro modhi) * 1 seti Izvo zvinonyanya kubatsira kune vatsva vatangiri kudzidza kudzidza zvachose. 1. Inoratidzira sehupenyu hwakazara hwekupoda maitiro ganda 2. Maziso nemuromo zvinotsiviwa nyore nyore kuti ushandise. 3. Nzvimbo yakatenderedzwa yeziso inoisa zvakare inovhara mitsetse yetsiye. Zvimwe zvekuisa zvinotengeswa zvakasiyana Chigadzirwa ichi chinoshandiswa kune vadzidzi vechigarire. Izvo zvinonyanya kubatsira kune vanotanga. Unogona kuchinja maziso uye mou ...
20 x 15cm Blank Tattoo Dzidzira Ganda Sheet
Yakagadzirwa kubva mukugadzirwa kweganda-senge inochinjika rabha Izvi zvakanaka kuti udzidze kutema nyora kune anonyora anodzidzira kudivi rekuseri kweganda rekunyepedzera rinogona kushandiswa Iri ganda rekunyepedzera harina chinhu pamativi ese maviri Masayizi: Approx. 20x15cm Weigth: 50g Ronga yako yekufambisa - Ink inogona kushatisa chaizvo. Chikamu chekudzidzira inzira huru yekunzwisisa mashandiro ekuita kutenderera nyora. Nekuvandudza hunyanzvi hwako, iwe unodzivirira kuteura nekuparadzira inki panguva yako yekutanga tattoo. Semuenzaniso, iwe unogona kuwana iyo ...
Blank Permanent Makeup Kudzidzisa Ganda 290 * 195 * 3MM Kutanga Kwakaonda Silicone Tattoo Dzidzira Ganda
1. Batsira vanotanga nekukurumidza kukwidza mwero wetato 2. Synthetic material, yakachengeteka, isina zvinhu zvinokuvadza 3. Flexible, anechete kunzwa 4. Yakanangana nevatangi uye vane ruzivo maartist. 5. Inoita kuti basa renyanzvi ye tattoo rive nyore. Zita: rovedza ganda Chinyorwa: silicone Kupaka saizi: 290 * 195 * 3MM Gross Kurema: 0.22 kg Iyo Yakanyanya Tattoo Kudzidzira Ganda Makore mashoma apfuura, vateki vematato vaive nesarudzo dzakaganhurirwa kana zvasvika pakudzidzira matehwe. Iyo mizhinji yaigadzirwa kubva kurabha kana plastiki, ...
Ruoko-bata nebhandiji Nyoro Elastic Silicone Tattoo Dzidzira Ganda
1.Midziyo: Chakagadzirwa Chakagadzirwa Nedehwe matsva maitiro uye kuyedza kuwedzera yavo hunyanzvi seti Iyo tattoo inodzidzira ganda ndicho chishandiso chekupedzisira cheunyanzvi-hwekugadzirisa hunyanzvi uye zvakare nekugadzira zvidimbu zvaunogona kuratidzira kune vangangove vatengi. Dhizaini nhasi dzinosanganisira kuomesa kujekesa uye shading inotora ...
20 * 30 * 0.13cm nyora nyora tsika ganda yepamusoro mhando Permanent makemikari tsiye kudzidziswa Skin Microblading inopa ganda
Tattoo Dzidzira Ganda remhando yepamusoro kudzidzisa ganda *** Package: 1pcs *** Plain pamusoro peiyo freestyle dhizaini uye maitiro, Dzidzira matekiniki akasiyana, kubva pakutsanangura kusvika kumumvuri *** Yakagadzirwa kubva kune yekugadzira yeganda-senge zvinhu *** Bvumidza iwe kunatsiridza yako hunyanzvi usinga dzidzise paganda chairoInochinja uye ine manzwiro akafanana seganda revanhu, Yakakura zvakakwana kuti ishandiswe mativi mashandiro Basa: Tattoo Dzidzira Saizi: 200 * 300 * 1.3mm Kurema: 0.1kg Kurongedza: 1pc / opp bhegi Mashandisiro Ekushandisa Tattoo Kudzidzira Ganda In ord ...
20 * 15 * 0.13cm tattoo tsiye tsika ganda yepamusoro mhando Permanent makemikari eyebrow tattoo kudzidzisa tattoo Microblading inopa ganda
Tattoo Practice Ganda remhando yepamusoro kudzidzisa ganda rekupoda Zvimiro: 1. Batsira vanotanga nekukurumidza kukwidza mwero wetato 2. Synthetic material, yakachengeteka, isina zvinhu zvinokuvadza 3. Flexible, anonzwika chaiko 4. Akanangana nevatangi uye vane ruzivo maartist. 5. Inoita kuti basa renyanzvi ye tattoo rive nyore. Rondedzero: 1. Chinyorwa: Chakagadzirwa Chakagadzirwa Nyoro 2. Zviyero: 200 * 150 * 1.3MM 3. Net Kurema: 80g / PCS Package Inosanganisirwa: 1x Tattoo Dzidzira Ganda Tattoo Dzidzira Ganda - Matipi uye Zvakanakira Izvo hazvisi ...